Praiminisitra Ntsay Christian: matotra ny paikady hiadiana amin’ny aretina kitrotro | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: matotra ny paikady hiadiana amin’ny aretina kitrotro
Notanterahina teo anivon’ny primatiora ny fivoriana mikasika ny valanaretina kitrotro, notarihin’ny Praiminisitra, lehiben’ny governemanta, i Ntsay Christian, niarahany tamin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny firenena malagasy sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ny minisitera voakasika.
Tanjona ny hanatrarana ho 95% ny tahan’ny fanaovana vaksiny ny zaza ao anatin’ny efa-bolana ho avy. Mitotaly 7 tapitrisa ny zaza voakasik’izany, ary efa nisy ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana hanatanterahana ny hetsika.
Nanazava ny praiminisitra fa efa maro ny distrika voakasiky ny valanaretina kitrotro ary efa miditra amin’ny dingana voalohany amin’ny fanentanana fanaovana vaksiny isika izao ka hitohy hatramin’ny volana avrily izany.
Navoitrany fa miompana amin’ny fomba roa mazava tsara ny paikady hoentina miady amin’ny valanaretina ka voalohany amin’izany ny fijerena ny tarehimarika ahafahana manana fitaovana hijerena ny fivoaran’ny valanaretina.
Eo koa ny fanatsarana ny lafiny serasera, indrindra ny fandresen-dahatra amin’ny fanaovana vaksiny, hiarahana miasa amin’ireo ray aman-dreny, tangalamena ary ireo sekoly sy ny tompon’andraikitra ao aminy.
Jerena ihany koa ny mikasika ny filàna misy na eo amin’ny lafiny vaksiny na eo amin’ny lafiny vola. Fantatra fa vonona hanampy ny mpiara-miombon’antoka na amin’ny fividianana vaksiny na amin’ny lafiny fahaiza-manao.
Araka izany, nanao antso avo tamin’ny vahoaka malagasy ny praiminisitra samy handray ny andraikitra tandrify azy amin’ny ezaka atao hiadiana amin’ny fipariahan’ny valanaretina kitrotro.